मिथिला कप क्रिकेट प्रतियोगीतामा पर्सा र डि.आर.सि.ए. धनुषा बिजय - News Madhesh
युवा शक्ति क्लव विष्णुपुरद्धारा संचालित तेस्रो संस्करणकोे मिथिला कप क्रिकेट प्रतियोगीताको दास्रो दिनको खेलमा पर्साले मोरङ लाई ५४ रनले र डि.आर.सि.ए. धनुषा ले सिरहा लाई ७ विकेट ले पराजित गर्दै बिजय हात पारेका छ ।
सोमवार म.बि.व.क्याम्पसको खेल मैदानमा पहिलो टस जितेर युनाईटेड क्रिकेट क्लव पर्साले निर्धारित २० ओभरमा १० बिकेट गुमाई १ सय ३८ रनको योगफल खडा गरेको थिए ।
जसमा टिमका लागि इमरान सेक ३२ रन, असब मंसुरी ३० रन तथा नरेश गिरी १४ रनको योगदान गरेका थिए ।
बलिंग तर्फ बिराटनगर स्पोटीङ क्लव,मोरङ का मेहबुब इराकी ३ विकेट, सउगात भगत २ विकेट, मिनस थापा, बिधान गोश्वामी समान १–१ विकेट हात पारेका थिए ।
जवाफमा बिराटनगर ले १७ ओभर ५ बलमा आफ्नो विकेट गुमाउदै ८३ रनमै सम्पुर्ण विकेट गुमाए । जसमा विराटनगरका लागी मुकुन्द यादव २० रन, निरज मुखिया १८ रन र सिदान्त लोहनी १४ रनको योगदन दिएका थिए ।
बलिँग तर्फ पर्साका अलफाज मंसुरी ३ विकेट तथा साइफल, समसाद, राजा र नसरुदिन समान १–१ विकेट हाथ पारे पछि पर्सा ले सजिले जित हाथ पार्न सफ भएका थिए । सो खेलको म्यान अफ दि म्याच युनाईटेड पर्साका अलफाज घोषित भएको थिए ।
यसैगरी सोमवार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा सिरहालाई ७ विकेटले पराजित गर्दै धनुषा बिजय भएका छन् ।
टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सिरहा ले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाई १ सय १ रनको योगफल खडा गरेका थिए । जसमा दिपेश दास ३० रन, शैलेन्द्र साह २४ रन र अमित मण्डल १५ रन जोडेका थिए । बलिंग तर्फ डि.आर.सि.ए. धनुषा का सैमन राय ३ विकेट, अकाश राय र बिशालले जम्मा २–२ विकेट तथा दिव्यान्सु मलिकले १ विकेट हाथ पारेका थिए । जवाफमा १ सय १ रनको लक्ष्य लिएका डि.आर.सि.ए. धनुषा ले १७ ओभर ३ बल खेल्दै बिजय हाथ पारेका थिए । जसमा हिमांसु दत अविजित रहदै ३६ रन जोडे भन्ने रौनक रतन २१ रन तथा बिशाल सुस्लीङ्गले १९ रनको योगदान दिएका थिए । बलिँग तर्फ सिरहाका मनोज यादव २ विकेट तथा सुमन १ विकेट हाथ पारेका थिए ।
सो खेलमा विजेता टिमका सैमन्न राय म्यान अफ दि म्याच घोषित गरिएको छ ।